Maxay Tahay Sababta Aaladda Wada Shaqeynta Hal Abuurka ah Ay Kooxdaadu Ugu Muhiim Tahay Inay Ku Barwaaqoobaan | Martech Zone
Hightail ayaa soo saartay natiijooyinka midkeedii ugu horreeyay Xaaladda Sahaminta Wadashaqeynta Hal-abuurka ah. Sahamintu waxay diiradda saartay sida suuq-geynta iyo kooxaha hal-abuurka ay iskaga kaashadaan bixinta buurta asalka asalka ah ee loo baahan yahay si loo wado ololeyaal, loo gaarsiiyo natiijooyinka ganacsiga loona kordhiyo iibka iyo dakhliga.
Kheyraad La'aan iyo Baahida loo Kordhay ayaa wax yeeleysa hal-abuurka
Iyada oo ay soo kordhayso waxyaabaha ka kooban dhammaan meherad kasta, baahida loo qabo mid gaar ah, soo jiidasho leh, xog-warran, iyo waxyaabo tayo sare leh ayaa ah mid maalmahan taagan. Raadinta algorithms waxay ubaahantahay, shabakadaha bulshada ayaa kufiicnaanaya, ganacsataduna way ka faa'iideystaan. Si kastaba ha noqotee, markii dalabku kordho, hal-abuurka waa la jajabiyaa.
In ka badan 1,000 suuq-geyn iyo xirfadlayaal hal abuur leh ayaa ka jawaabey, iyaga oo siinaya talooyin ah in habka wada shaqeynta hal abuurnimadooda ay tahay mid aad u walaac badan, qashin badan iyo, yareysa tayada nuxurka hal-abuurka. Nidaam aan waxtar lahayn, nidaam jaban oo ku saabsan iskaashiga hal-abuurnimadu waa mid walaac leh, niyadsami kooxeed burburinaysa oo si taban u saamaynaysa tayada wax soo saar hal abuur leh.
Waxyaalaha tayada sare leh ee asalka ahi waxay shidaal u yihiin koritaanka. Kooxaha suuq geyntu waxay caqabad ku yihiin inay la kulmaan baahida kordhay oo ay soo saaraan waxyaabo asal ah oo asal ah oo shakhsi ahaaneed, khuseeya, buuxiya tilmaamaha astaanta iyo tayada ugu sareysa, badankoodana waxay u baahan yihiin inay ku sameeyaan isla ilo. Dhibaatadani waxay u sii kordheysaa mid deg deg ah kooxaha ugu fiicana waxay raadinayaan habab cusub oo ay ku wada shaqeeyaan - laga soo bilaabo rimidda ilaa dhameystirkeeda - si loo daboolo baahida sii kordheysa. Madaxa Sare ee 'Hightail', Ranjith Kumaran
87% hal abuurayaashu waxay isku raacsan yihiin inay muhiim u tahay ururkooda inay ilaaliyaan tayada nuxurka halka ay si fudud ku jiraan kordhinta ilaha jira si loo daboolo baahida mawduuca.
77% hal abuurayaashu waxay oggol yihiin dib u eegista hal abuurka iyo habka oggolaanshaha inay tahay mid walaac badan
53% hal abuurayaashu waxay yiraahdaan culeyska kordhay wuxuu ka dhashay dad badan oo ku lug yeeshay dib u eegista iyo ogolaanshaha
54% hal-abuurrada ayaa isku raacay in kooxdooda suuqgeynta ay shaqada ka joogeen, walaaca jira awgood
55% hal abuurayaashu waxay ka walwalayaan inay daboolaan baahida sii kordheysa ee ku saabsan waxyaabo badan oo tayo sare leh
In ka badan 50% hal-abuurrada ayaa sheegaya in dhammaan qaybaha ka mid ah geeddi-socodka horumarinta hal-abuurnimadooda ay dhibaato leeyihiin
Maaha “kaliya” dhibaatada suuqgeynta, waxay dhaawaceysaa ganacsiga oo dhan
Nidaamka jaban wuxuu ku kacaa lacag dhab ah, dib u dhacuna wuxuu ku xiran yahay kobaca dakhliga oo gaabis ah:
62% ayaa aaminsan waqti iyo lacag ayaa lagu lumiyaa marka la saxayo ismaandhaafka iyo is af garanwaaga ka yimaada geedi socodka burburay.
48% waxay dhahaan kuwooda kororka dakhliga ayaa la dhaawacay maxaa yeelay ma aysan bixin karin waxyaabaha tayada leh xawaare ku filan;
58% waxay dhahaan kordhinta iibka iyo dakhliga waa faa'iidada ugu weyn ee ganacsiga ee wax looga qabanayo caqabadaha ku jira geedi socodka iskaashiga hal-abuurka ah
63% waxay yiraahdaan waa aan awoodin inuu tijaabiyo hal-abuur kala duwan inta ay rabaan, xaddidaya saamaynta maalgashigooda warbaahinta
Kooxuhu Waxay Raadinayaan Wadiiqo Ka Wanaagsan Oo La Is Kaashado
In kasta oo suuq-geynta iyo kooxaha hal-abuurka ahi ay ka caban karaan, 85% waxay dhahaan in wada-shaqeynta iyo iskaashiga - markay fiicantahay - ay noqon karaan mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan shaqooyinkooda. In kasta oo daraasaddu shaaca ka qaaday in 36% ay rumeysan yihiin in aanu jirin xalka tiknoolajiyadda ee lagu xalliyo dhibaatooyinka ay la kulmaan iskaashiga hal abuurka ah, taasi run maahan.
Runtii waan ka faa'iideysanaa Khasaaro macaamiishayada si aan uga caawino dib u eegista sawirada, animations, podcasts, iyo fiidiyaha macaamiisheena. Barxadku wuxuu bixiyaa xiriir nadiif ah oo loogu talagalay fikradaha kooxda, maareynta hantida, aragtida, jawaab celinta, iyo ansixinta.
Tags: maaraynta hantidaogolaansho hal abuur lehiskaashi hal abuur lehjawaab celin hal abuur lehhabka abuurkakooxo hal abuur lehfikirkanatiijooyinka sahankakooxda
Maqaal weyn Doug!
Waa tan sabab kale ee wax abuurayaashu ugu baahan yihiin aaladaha iskaashiga –waxay si weyn kor ugu qaadi karaan wax soo saarkooda iyagoo ka shaqeynaya guriga ugu yaraan dhowr maalmood usbuucii.
Eeg, habka hal-abuurku wuxuu u baahan yahay xoogaa waqti aamusnaan ah oo hal abuur leh. Beeraha Cubicle ayaa ku burburay taas goobta shaqada, inta badan. Aad ayey uga adagtahay inaad gasho Aaga oo aad halkaa ku sii nagaato muddo ku filan si aad u hesho natiijooyin aan kala go 'joogto ah lahayn.
Markaas waxaa jira safar. Waxaan ku khasaarin jiray 3 saacadood maalintii anigoo dib iyo gadaal u kaxayn jiray shaqadayda Silicon Valley. Saacadahaas waxba igama qaban shaqo-bixiyeheyga ama aniga wax wanaag ah haba yaraatee – waxay ahayd waqti lumis iyo culeys dheeraad ah.
Ka fikir soo kabashada 3daas saacadood xitaa 2 maalmood usbuucii – 6 saacadood oo dheeri ah oo wax soo saar leh. Iyo, laga yaabee wax soo saar badan oo xafiiska guriga deggan.
Laakiin, waxay shaqeysaa oo keliya haddii aad weli wada shaqeyn karto oo aan lagaa goyn.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan u maro sharraxaadda nidaamka wax soo saar ee aan ugu isticmaalo shaqadayda. Solopreneur ahaan, waxaan dhisay ganacsi khadka tooska ah laga helo oo sanadkiiba ay soo galaan dad gaaraya 4.5 milyan oo qof oo soo galiya dakhli qurxoon. Ma jirto si uun aan ku qaban karay iyada oo aan wax soo saar noocan oo kale ahi jirin.
Waxaan ku sharaxayaa nidaamkeyga koorso bilaash ah oo khadka tooska ah laga heli karo halkan:
Waxaa si gaar ah diirada loogu saaray baahiyaha abuurka, marka waxaan rajeynayaa inay akhristayaashaada ka faa’iideysan karaan.
Waxaan rajeyneynaa boostadaada soo socota ee weyn.